यस्तै भयो ओलीलाई कुर्सी
विलियम शेक्सपियरले लेखेका थिए– वीर मानिसहरु एकपटक मृत्युको अनुभव गर्दछन् तर कायर मृत्यु आउनुभन्दा पहिल्यै पटक पटक मरिसक्छन् ।
केपी ओलीका लागि निर्वाचित सत्ता यस्तै भएको छ । उनी सत्तामा पुगे, सर्वशक्तिमान प्रधानमन्त्री पनि बने । तर उनले बिर्सिए, उनलाई यो सर्वशक्ति नागरिकले दिएका हुन्, उनलाई हात्तीले राजा बनाइदिएको होइन ।
ओली सत्तामा गएको २६ महिना भयो । २६ महिनामा २६ भन्दा बढी गल्ती गरेका छन् । उनी बलात्कार, हत्या, सुन तस्करी, जहाज खरिद, बालुवाटारको जग्गा प्रकरणसँगमात्र जोडिएका छैनन्, राष्ट्रको सम्पत्ति माफियालाई दिएर कमिशन खानेमा पनि दरिएका छन् । राष्ट्रले पाउनै पर्ने लाभकर छुट दिने र नेपालको नक्सा आकारको केक काटेर जन्मदिन मनाउने नालायक पनि केपी ओली नै हुन् । यी सबै अपराधहरु सहेर बस्ने र उनलाई के गरेको यो भनेर सोध्न नसक्ने नेकपा पार्टी पनि दोषभागी छ । नेकपा देशका लागि सराप नै बनिसक्यो अव ।
नेकपाका लागि गधाले मेचमा टाउको घुसारेजस्तो भएको छ । नेकपाको शासन नेकपा जिताउने नागरिकका लागि पछुतो बन्नपुगेको छ । देशभक्त छ यो पार्टी, ओली भनेर मतदान गरेर जिताए, सत्तामा पुगेपछि जनतामाथि अधिनायकत्व लाद्ने र जनतालाई परेका बेलामा सहारा दिन नसक्ने साबित हुनपुगेको छ ।
गधा र नेकपालाई मेच, सत्ता उस्तै उस्तै भएको छ । चिन्नेलाई श्रीखण्ड, नचिन्नेलाई खुर्पाको बिँड भनेजस्तो । यो सब देख्दा हेर्नेलाई पनि दिक्क, भोग्नेलाई पनि दिक्क । सरकारको अलोकतान्त्रिक क्रियाकलाप यस्तै यस्तै भएको छ । नेकपा नेतृत्वको नेपाल सरकार भनेको त अपराधशाला बनेको छ । न्यायाधीशदेखि संवैधानिक पदहरु खल्तीबाट झिकेर दिनसक्ने निरंकूश कोही भयो भने त्यो नेकपा नेतृत्वको सरकार, ओली भए । यो पापकर्मले लोकतन्त्र गनाउन थालेको छ ।
यो सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि पूर्व आइजीपी सवेन्द्र खनाल, महेश बस्नेत र कृष्णगोपाल श्रैष्ठ लगाएर महोत्तरीबाट सांसद सुरेन्द्र पाण्डेको अपहरण नै गरेर काठमाडौं ल्याए । एक त लकडाउनको स्थिति, अर्कोतिर यति ठूलो अपराधकर्म । यस्तो सरकार र यस्तो कूकर्ममा सहभागी हुनेलाई क्वारेन्टाइनमा राखेर कोरोनाको जाँच गर्नेकि नगर्ने ? कठघरामा उभ्याएर अपराधी साबित गर्ने कि नगर्ने ? जुन अपराध हिजो शेरबहादुर देउवाले गरेका थिए– सांसद किनबेच, अपहरण, होटलमा लुकाउने । जुन अपराध माओवादी शासनकालमा महराले गरेका थिए– सांसद किनबेच गर्न चीनसँग ५० करोड माँगेर । त्योभन्दा घोर अपराध गरेका छन्, प्रधानमन्त्री केपी ओलीले । यो गधालाई मेचजस्तो दृष्टान्त भएन त ? photo- fb